သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - အလယ်ပိုင်းဘာသာစကားများကျောင်း, ကိန်းဘရစ်
နယူး GDPR စည်းမျဉ်းများ
မေလ 2018 ၏သစ်ကိုအစိုးရမှာ Data ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ, ဗဟိုဘာသာစကားကိုကျောင်းကိန်းဘရစ် (CLS) ၏ Trustees ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသောသူအပေါင်းတို့န်ထမ်းများ, ကျောင်းသားများ, အေးဂျင့်များ, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်ကျောင်းများ၏အခြားသောထောက်ခံသူများအသိပေးချင်ပါတယ် ကျနော်တို့အသုံးပြုသူများသည် '' privacy ကိုမှကျူးလွန်နေကြသည်အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤ website ကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာနှင့်အတူကျောင်းပေးခွငျးအားဖွငျ့, သငျသညျ CLS ၏ privacy ကိုမူဝါဒအလကျခံဖို့သဘောတူသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုသော့ခတ် CLS ရုံးထဲမှာလုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်သာ CLS မှတ်တမ်းများအဘို့ကောက်ယူနေသည်နှင့်သင့်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျောင်းအပြင်ဘက် shared မည်မဟုတ်ပါ။
CLS ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများကို '' သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လျှို့ဝှက်မှကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်နေတုန်း, မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အမည်, လိပ်စာတွေ, ဖုန်းနံပါတ်များ) နှင့်အတူ CLS ပေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုလက်ခံဖို့ CLS အချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက်မဆိုတာဝန်ယူမှုကိုလကျမခံနိုငျကွောငျးသဘောတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပတွင်အလွဲသုံးစားမှုထံမှတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုဒေတာစုဆောင်း CLS မှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသိမ်းဆည်းထားသလဲ?
အုပ်ချုပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မတိုင်မီကျောင်း (အမည်, အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်လိပ်စာများစသည်တို့ကို) မှာကျောင်းအပ်ဖို့ကျောင်းသားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို
ဝန်ထမ်းများ, Trustees, အေးဂျင့်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (အမည်, အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်လိပ်စာများစသည်တို့ကို) အိမ်ရှင်အဖြစ်
သင်တန်းမေးမြန်းချက်, CVs နှင့်မည်သည့်လူမှုမီဒီယာအဆက်အသွယ်အပါအဝင်မည်သည့်အီးမေးလ်ကိုစာပေးစာယူ၏မှတ်တမ်းများ
အဘယ်ကြောင့် CLS စတိုးဆိုင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာသနည်း
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာနှင့် ပတ်သက်. သင့်အခွင့်အရေးများဘာတွေလဲ?
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်သိုလှောင်မှုစပ်လျဉ်းအောက်ပါအခွင့်အရေးများရှိသည် - ပိုင်ခွင့်:
CLS ရရှိထားသူကြောင်းကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များတောင်းဆိုမှုကို access ကို
မရှိတော့ CLS အုပ်ချုပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဖျက်ပစ် CLS ကြောင်းတောင်းဆိုချက်ကို